Cabdiraxmaan Saylici Shaatigiisa Siyaasadeed Ninkii Xidhoow Mar Uun Baa Lagu Qaawin W/Q:Maxamed Cabdillahi | Radio Borama
You are here : Radio Borama » FADHIGA SUBULAHA » Cabdiraxmaan Saylici Shaatigiisa Siyaasadeed Ninkii Xidhoow Mar Uun Baa Lagu Qaawin W/Q:Maxamed Cabdillahi
Cabdiraxmaan Saylici Shaatigiisa Siyaasadeed Ninkii Xidhoow Mar Uun Baa Lagu Qaawin W/Q:Maxamed Cabdillahi
Posted by admin on August 29th, 2017 10:48 PM | FADHIGA SUBULAHA
Marka hore qoraalkaygani maaha mid ay ula jeedadisu tahay inaan ku aflagaadeeyo Madaxaweyne ku xigeenka Soomaaliland balse siyaasi kasta waxa uu leeyahay wanaag iyo dhaliil.
Siyaasi kastana waxa wanaagiisa sheegi kara dadka aad u taageera (Diehard supporters) dhaliishiisana waxa sheegi kara dadka siyaasadiisa kasoo horjeeda amaba dadka dhexdhaxaadka ah ee siyaasada miisaama.
Dabcan aniguna waxan ahay anoon iskuba kiin qarin dadka siyaasada Mudane Cabdiraxmaan Saylici aan la dhacsanayn, markaa waad garan kartaan dhinaca aan wax ka eegayo laakiin hadana akhristaha maskaxda furan waxa ku haboon inuu is weydiiyo waxa aan qoraalkan kusoo gudbin doonaayi inuu run yahay iyo inuu been yahay iyo waliba inaan cadaymo u hayo macluumaadka aan halkan ku daabacayo.
Haddaba hadaan intaa kaga gudbo hordhaca qoraalkayga oo inta badan ku wajahan dadka reer Awdal waxan wada ognahay in xisbiga Kulmiye yahay xisbigii Mudane Saylici siyaasada Somaliland kasoo galay wakhtigii uu xisbigaasi mucaaradka ahaa.
Inkasta oo ay dad badani ku dacaayadeeyn jireen amaba ilaa imika isku madadaaliyaan in uu Saylici ahaa amaba yahay siyaasi jilicsan hadana Saylici waxa uu ahaa mucaarad adag oo udub dhaxaadkiisu ku qotomnaa gobolka Awdal oo uu kasoo jeeday Daahir Rayaale oo markaa madaxweyne ka ahaa Somaliland taas oo iyadna culeyskeeda lahayd.
Si uu uga badbaado duruufihii siyaasadeed iyo caqabadihii gobolka ka haystay wakhtigaa Cabdiraxmaan Saylici waxa uu gobolka Awdal ka ciyaari jiray siyaasad afar geesood ah iskuguna jirtay tola’ayeey iyo inagaa ood wadaagleh iyo saaxiib bay nunahay iyo xulufaysi siyaasadeed oo aan abid horay gobolka uga dhicin taas oo illaa hada oo uu madaxweyne ku xigeenyahay aanu Saylici iska badalin.
Iyada oo ay sidaa tahay hadana Cabdiraxmaan Saylici coddad badan gobolka ugama uu keenin xisbiga Kulmiye wakhtigii doorashadu dhacday duruufa jiray awgood balse wuxu dadaalkiisii udhib yareeyay markii uu Kulmiye guulaystay in uu gobolka Awdal Saylici samayn weyn ku yeesho taas oo ka duwan kuwii horay looga bartay siyaasiyiintii ka horaysay ee kasoo jeeday gobolka.
Haddaba waxa isweydiin mudan Saylici siduu ka yeelay saaxiibadii uu Kulmiye kusoo dhaweeyay ee uu shaatiga Kulmiye u xidhay amaba lasoo jabay iyo kuwii Daahir la xijisiin jiray ee ay dadka qaar falaagada Kulmiye kusheegi jireen.
Bal aynu isyara xasuusino si aynu u fahamno halkay ragii Saylici lasoo jabay iyo waliba kuwo uu mardambe shaatigiisa Kulmiye u galiyay ku dambeeyeen iyada oo ay maantana taaganyihiin calaamadihii wakhtigaasi
1) C/naasir Maxamuud Qawrax (mango) xoghayihii u horeeyay maamulka kulmiye oo ahaa nin aad ula soo dadaalay Saylici iyo kulmiye waynu ognahay halkay Saylici isla mareen
2) Maxamed Cumar Sheekh Ibraahim (Hyne) Kulmiye Awdal’s propaganda Machine iskumay raagin Saylici Hyne
3) Maxamed Daahir Cabdalle. Gudoomiyihii u horeeyay ee Awdal Saylici ragii ay iskugu dhawaayeen maanta haybtiisa lama hayo
4) Ibraahim Qaalib oo ahaa gudoomiyihii gobolka ee xisbiga Kulmiye kaas oo Xirsi ka caydhiyay shaqada balse aan taageero ka helin Saylici sida la sheegay.
5) Daahir Fifteen taageerayaashii Saylici wakhtigii Kulmiye mucaaradka ahaa
Kuwii dhexda kasoo fuulay baabuurka Saylici.
1) Aadan Xaaji Muxumed Aye. Saylici wuu uga dacareeyay inuu xoghayaha degmada noqdo
2) Cabdirasaaq Cali Cismaan
3) Maayarkii horee Borama Saleebaan Afar Jeeble
4) Xassan Daahir Dhimbiil wasiir ku xigeenkii gaashandhiga oo lagu eryay morankii Saylac
5) Maxamed Jaamac Abgaal (Sagaaro) oo uu Saylici mudo watay markii dambana uu dabbaylo ku furay
Ragaa iyo kuwo kale oo badan ayuu Saylici shaadhkiisa u xidhay ninba mar, dabadeedna wuu kasaaray.
Haddaba maanta Saylici oo ah siyaasi dantiisa yaqaan ayaa waxa uu ku dadaalayaa inuu xidho xadhka adag oo uu kaga guulaysto Maxamed Cali oo tartan ka dhexeeyo kana tirsan xisbiga Waddani, waxana uu Saylici doorkan tartamayaa isaga oo khibrad iyo lacagba haysta kana cududo waaweyn markuu mucaaradka ahaa.
Tanina waa ta maanta keentay in xulufadii Waddani taageeraysay ay u kala dhuuntaan guriga Saylici oo Suldaan iyo siyaasiba si dhibyar uu u hantiyo Saylici.
Doorashada Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanlena waa mid kamida talooyinka cod raadsiga ah oo uu Saylici kasoo shaqeeyay balse waxa layaableh in taageerayaal badan oo waddani tirsanayay ay maanta farxad darteed madax lulaan.
Dhinaca kale Saylici kalsoonidiisu waxay maanta maraysaa in uu dhaafo bixinta jagooyinkii maamulka dawliga ah ee gobolka isagoo jagooyinkii guryaha ee Booramana maanta xafiiskiisa laga soo saxeexayo
Iyada oo dhanka kalana ay jiraan siyaasiyiin gobolka kasoo jeeda oo Waddani ka tirsanaa kuwaas oo isku diyaarinaya in iyaguna xidhaan shaatiga Saylici.
Gabagabadii iyo gunaanadkii bulshada reer Awdal inta dhexdhaxaadka ah waxan kula talin lahaa in aan Kulmiye mar labaad lagu hungoobin kuwa u hanqal taagayana waxan leehay Kulmiye Awdal waxa uu kayahay shaatiga Saylici ninkasta oo uu u xidhana maalinkuu doonuu ka saari ee taa ha la ogaado.
« Shirkada Aloog Electricity ee Magaalada Borama oo Adeega Qoraxda iyo dabaysha dabka laga dhaliyo ku soo kordhisay Adeega Awood Dabka ee ay bixiso
Sixirku ma farsamaa mise waxaa dadka la shaqeeya jiman iyo shayaadiin , hoos ka daawo , Nin sixir ku sameeyey indho sarcaad »